तपाईले प्रयोग गरेको सिम कार्ड कस्को नाममा छ ? - NayaNepal News
Home समाचार तपाईले प्रयोग गरेको सिम कार्ड कस्को नाममा छ ?
काठमाडौं । तपाईले प्रयोग गरेको सिम कार्ड कस्को नाममा छ ? यसरी हर्नुहोस् । नेपाल टेलिकम सम्बन्धी विविध जानकारी यस्तो छ । मोबाइलको ब्यालेन्स थाहा पाउन *400# डायल गर्नुहोस । आफ्नो मोबाइल नम्बर थाहा पाउन *9# डायल गर्नुहोस । आफ्नो मोबाइल नम्बर कस्को नाममा छ थाहा पाउन *922# डायल गर्नुहोस । कल फरवार्ड गर्न **21*98xxxxxxxx (फरवार्ड गर्न चाहेको नं.)# डायल गर्नुहोस । कल फरवार्ड Cancel गर्न ##002# डायल गर्नुहोस । Call Waiting सेवा सुचारु गर्न *43# डायल गर्नुहोस । Call Waiting सेवा Cancel गर्न #43# डायल गर्नुहोस ।
मोबाइलमा Friends and Family (FNF) सेवा सुरु गर्न पहिलो पटक FNFSUB*98XXXXXXXX लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस र अन्य ४ वटा नम्बर थप गर्न FNFADD*98XXXXXXXX लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस । प्रिपेड मोबाइलबाट अर्को नम्बरमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न *422*SECURITY CODE*98XXXXXXXX*Rs..# डायल गर्नुहोस ।
आफ्नो पोस्टपेड मोबाइल तथा ल्याण्डलाइन टेलिफोनको मासिक बिल, बाँकि रकम, अग्रिम रकम आदि हेर्न www.http://gsmbl.ntc.net.np/ मा login गर्नुहोस ल्यान्डलाइन को लागि AC Number (मासिक महशुल तिरेको बिलमा लेखेको हुन्छ) र मोबाइलको लागि PUK नम्बर राखेर हेर्न सकिन्छ । आफ्नो मोबाइल नम्बरको Security Code प्राप्त गर्न SCODE लेखेर र PUK Code प्राप्त गर्न PUK लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस। पोस्टपेड मोबाइलमा ISD सुबिधा थप्न #331*0000# डायल गर्नुहोस र सुबिधा हटाउन *331*0000# डायल गर्नुहोस ।
डाटा प्याक तथा भ्वाइस प्याक सम्बन्धि नयाँ Offer थाहा पाउन *1415# डायल गर्नुहोस । Data Pack खरिद गर्न *1415*1# डायल गर्नुहोस र Voice Pack खरिद गर्न *1415*4# डायल गर्नुहोस । बाँकी डाटा र भ्वाइस प्याक थाहा पाउन *1415*5# डायल गर्नुहोस । मोबाइलमा CRBT राख्न *1455# डायल गर्नुहोस र प्राप्त निर्देशन अनुसार गर्नुहोस अथवा CRBT Code छ भने SUB स्पेस CRBT Code लेखेर 1455 मा SMS गर्नुहोस । मोबाइलमा CRBT हटाउन UNSUB लेखेर 1455 मा SMS गर्नुहोस अथवा *1455# डायल गर्ने * लेखेर पठाउने, अनि 8 लेखेर पठाउने अनि अन्तमा सुनिश्चित गर्न 1 लेखेर पठाउनुस।
नमस्ते CREDIT सेवा सुचारु गर्न – आफै हुन्छ र नमस्ते CREDIT सेवा बन्द गर्न STOP लेखेर 1477 मा SMS गर्नुहोस ।
Missed Call Alert (MCA) सेवा सुचारु गर्न *1400# डायल गर्नुहोस या sub mca लेखेर १४०० मा SMS गर्नुहोस
Missed Call Alert (MCA) सेवा बन्द गर्न unsub mca लेखेर १४०० मा SMS गर्नुहोस । ल्याण्डलाइन टेलिफोनको तिर्नुपर्ने बिल रकम थाहा पाउन CB*065XXXXXX (पुरा टे.न.)लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस Due Amount भनेको तिर्नुपर्ने रकम हो Available Credit भनेको फोन गर्न मिल्ने बाँकी रकम हो
ADSLको अन्तिम मिति थाहा पाउन VL*NTADSL065XXXXXX (पुरा टेलिफोन नम्बर)लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस ।
ADSLको ब्यालेन्स थाहा पाउन BL*NTADSL065XXXXXX (पुरा टेलिफोन नम्बर)लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस ।
नेपाल टेलिकमको Number Inquiry सेवाको लागि १९७ मा फोन गर्नुहोस । नेपाल टेलिकमको मोबाइल ग्राहक सेवाको लागि १४९८ मा फोन गर्नुहोस । ल्यान्डलाइन टेलिफोन मर्मतको लागि १९८ मा फोन गर्नुहोस ।
नेपाल टेलिकमको बिबिध सेवा बारे जानकारी लिन तथा ब्यालेन्स तथा बाँकि डाटा जानकारी लिन NEPAL TELECOM ( नेपाल टेलिकमको अफिसियल एप्लिकेसन्) मोबाइलमा डाउनलोड र रजिस्टर गर्नुहोस । मोबाइलमा टेलिभिजन हेर्न WOW TIMES एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस ।
Previous article६९ वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीः दरो आत्मविश्वास, खरो बोली
Next articleकोरियामा कोरोनाको त्रासः श्रम गर्न गएका नेपालीलाई के छ ?
चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस हुँदै
आज देशका अधिकांश भू–भागमा भारी वर्षाको सम्भावना